बालुवाटारको जग्गा हत्याउन डा. शोभाकान्त ढकालको समुहले के मात्रै गरेन ? बाहिरियो गम्भीर अडियो – Halkhabar kura
२९ माघ २०७६, बुधबार २२:५८
बालुवाटारको जग्गा हत्याउन डा. शोभाकान्त ढकालको समुहले के मात्रै गरेन ? बाहिरियो गम्भीर अडियो
बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने ‘योजनाकार’ शोभाकान्त ढकालले जग्गा मिलाउने क्रममा ठूलो रकम खर्च भएको खुलासा गरेका छन् । नातेदारसँगको लेनदेन विवादका क्रममा रेकर्ड भएर हाल सर्वोच्च अदालत पुगेको अडियोमा उनले आफूले सापटी लिएको रकमसमेत त्यही जग्गा मिलाउन खर्च भएको बताएका छन् ।
पैसा मुद्दामा गएको छ । तपाईंको मात्रै होइन, हाम्रो पनि कति पैसा गएको छ,’ भान्जीबुहारी पर्ने शान्ता खनालसँगको करिब साढे तीन घण्टाको कुराकानीका क्रममा ढकालले भनेका छन्, ‘राणाहरूले गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्यो, अख्तियारमा गयो । सबैसँग मुद्दा लड्दा कम हैरान त थिएन नि । मैले तपाईंको पैसा ल्याएर उहाँ बुझाएको हो । पैसा बुझ्ने मान्छे जिउँदै छ, सोधे हुन्छ ।’ ढकालले पैसा पुर्‍याउने र बुझ्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेका छैनन् ।
०४८/४९ सालतिर निम्न आर्थिक हैसियतका शोभाकान्तले आफ्नो दिनचर्या चलाउन सानोतिनो ‘जग्गा दलाली’ सुरु गरेका थिए । त्यसक्रममा ढकालले खनालसँग ऋण माग्ने, आफूले जग्गा तथा ब्याजमा लगानी गर्ने र प्रतिफल खाएर साँवासहितको मूलधन फिर्ता गर्न थालेका थिए । उनले बालुवाटारको जग्गामा पनि चलखेल सुरु गरेका थिए ।
‘लौ बालुवाटारको राम्रो ठाउँको जग्गा छ, अहिले नै लगानी गरे पछि भाउ पर्छ भनेर १० लाख रुपैयाँ मामाले लैजानुभएको हो,’ एक संस्थानको जागिरबाट अवकाश प्राप्त खनालले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘पछि न पैसा फिर्ता गर्नुभयो, न जग्गा दिनुभयो । रकम फिर्ता माग्दा मलाई झूटो मुद्दा लगाउनुभयो ।’ उनका अनुसार दोस्रोपटक ढकालले ३ लाख फेरि मागे । अनि शान्ताका भाइ रञ्जनलाई समेत थप ४ आना जग्गा दिने भनी २ लाख भारतीय रुपैयाँ लिए ।
ढकाल र रामकुमार सुवेदीलगायतको समूहले फर्जी मोही खडा गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हत्याएको आरोपमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । २०४९ सालताका राणा परिवारका नाममा सरकारीजग्गा हस्तान्तरण भएको थियो । २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका नाममा फेरि मोहीका नामबाट ढकाल र सुवेदीले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका थिए । त्यस क्रममा विभिन्न सरकारी निकायहरूमा फाइलहरू पुगेको र निकै उल्झन बेहोर्नुपरेको ढकालले उक्त कुराकानीमा बताएका छन् ।
ऋण खोजेर घूस- अडियो रेकर्डमा ढकालले बारम्बार सापटी मागेको पैसा मुद्दाका क्रममा खर्च भएको भन्दै जग्गा आएपछि कबोलअनुसार पास गरिदिने बताएका छन् । उनको भनाइअनुसार ‘मुद्दामा खर्च भएको’ भनिएको रकम बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न प्रयोग भएको बुझिन्छ ।
कुराकानीका क्रममा ढकालले आफूलाई भाटभटेनी सञ्चालक गुरुङले ठूलो परिमाणको ऋण पत्याएको तर आफ्नै नातेदार भएर पनि भान्जीबुहारीले नपत्याएको भनेका छन् ।
रुक्मशमशेर राणाहरूले पैसा हालेर लिएको जग्गा मीनबहादुरको नामबाट आफ्नामा नामसारी भएको भन्दै ढकालले मोहीको जग्गा पाउनासाथ नामसारी गरिदिने अडियोमा बताएका छन् । ‘कि भान्जी तपाईंले पर्खनुपर्‍यो, होइन भने १६ लाख रुपैयाँको ब्याजसहित ५० लाखभन्दा बढी फिर्ता गर्न सक्दिनँ,’ ढकालले भनेका छन्, ‘ए भान्जी, हजुरले आफूले हालेको पैसा मात्रै देख्नुभयो, त्यो बेला कतिको पैसा हाल्यौं, हामीलाई थाहा होला ।’
तीन परिवारको २५ रोपनी- बालुवाटारबाट व्यक्तिका नाममा गएकोमध्ये करिब २५ रोपनी जग्गा तीन परिवारका नाममा सीमित छ । ढकाल, सुवेदी, गुरुङ र उनीहरूकै परिवारका नाममा झन्डै २५ रोपनी जग्गा फेला परेको हो । व्यापारी गुरुङले आफ्नो परिवार र कम्पनीका नाममा समेत जग्गा खरिद गरेका छन् । ढकाल र सुवेदीको संयुक्त नाममा ९ कित्ता जग्गा छ जुन ३ रोपनी ७ आना हो । सरला गुरुङ, उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुवेदीका नाममा तीन कित्ता छ । उमाकुमारी र माधवीका नाममा थप ३ कित्ता जग्गा पनि छ । उनीहरू ढकाल, सुवेदी र गुरुङ परिवारकै सदस्य हुन् ।
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनका नाममा दुई कित्ताको करिब करिब आठ आना छ । यो जग्गा मिलेमतोबाटै ढकालले पौडेललाई दिएको भनी आलोचना हुँदै आएको छ । शोभाकान्त र उमा ढकालका नाममा ५ कित्ता छ, जुन करिब २२ आना हो । ढकालका छोरा विवेकका नाममा ३ कित्ता जग्गा छ । त्यसको क्षेत्रफल झन्डै दुई रोपनी छ ।
अर्को ३ कित्ताको सात आना पनि शोभाकान्तकै नाममा छ । मीनबहादुरले भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालिका नाममा १० कित्ता राखेका छन् जुन ३ रोपनी ९ आना छ । सरला गुरुङका नाममा ४ रोपनी १४ आना जग्गा छ । सरला पनि मीनबहादुरकै परिवारकी सदस्य हुन् । -कान्तिपुरबाट
(सर्वोच्च अदालत स्रोतबाट प्राप्त शोभाकान्तले शान्ता खनालसँगको विवादका क्रममा भनेकाकुराको अडियो रेकर्डको अंश।)
Previous माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि सरकारी जग्गा हिनामिनामा जेल सजाय माग्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
Next नेकपाले ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउने, अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले सम्बोधन गर्ने